Widespread manipulation of voters lists/ ဒါတွေဟာ ကျနော်တို့ ရှေ့ မှာ ပေါ်ပေါ်တင် ဗြောင်ကျကျ၊ မမျှမတဖြစ်မှုတွေ၊ အနိုင်ကျင့်မှုတွေနဲ့ မသာမှုတွေများစွာကို အာဏာပိုင်တွေက လုပ်ခဲ့တာ၊ ကျနော်တို့ လက်လှမ်းမမှီတဲ့ နေရာတွေမှာဆိုရင် ဒီထက်မက ပိုလုပ်ဖို့ ဘဲရှိပါတယ်။ | Burma Election Tracker
Widespread manipulation of voters lists/ ဒါတွေဟာ ကျနော်တို့ ရှေ့ မှာ ပေါ်ပေါ်တင် ဗြောင်ကျကျ၊ မမျှမတဖြစ်မှုတွေ၊ အနိုင်ကျင့်မှုတွေနဲ့ မသာမှုတွေများစွာကို အာဏာပိုင်တွေက လုပ်ခဲ့တာ၊ ကျနော်တို့ လက်လှမ်းမမှီတဲ့ နေရာတွေမှာဆိုရင် ဒီထက်မက ပိုလုပ်ဖို့ ဘဲရှိပါတယ်။ Posted in abuse of government authority
Arakan (unspecified division)
Arakan (unspecified township)
disrupting/preventing campaign activities
maniplation of results (counting and tabulation)
manipulation of election laws
manipulation of the voters list
violations of election laws
A voter from Arakan State who spoke to Burma Election Tracker said:"I'mamember of the Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) and voted for my party. There were many biases in the election campaign. There wasaprohibition to campaign in religious buildings such as: monasteries and chapels, but we could campaign in ward-chapels located away from monasteries. Campaigners were not allowed to use loudspeaker and only allowed to useasound box, but the USDP could get around all prohibitions. Other parties were only allowed to hold election campaigns until October 30, but the USDP could campaign up to November4without any restrictions. The Election Commission omitted all people fromawhole quarter from the voting list and didn't register some people on voting lists, even if they who had National Registration Card and were in the census. In some quarters, there wasalot of fraud such as: omitting 100 eligible voters from the voting lists, providing only 1500 ballot papers for 1700 voters, asking children who are under 18 to vote for the USDP, giving out temporary National Registration Cards to vote, and providing ballot papers without Commission seal. The authorities didn't arrange to watch and check who many timesaperson voted. There were many difficulties when voting because the authorities let over 3000 people vote inapolling station suitable for only 1500 people. The authorities openly performed all this inequality, malpractice and tyranny in front of our eyes and they will do more and more in unreachable places in Burma."
RNDP ပါတီဝင်ဖြစ်သဖြင့် ကိုယ့်ပါတီအားမဲပေးခဲ့ပါသည်။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေမှာ ဘက်လိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ ဥပဒေအရ ဘာသာရေး အဆောက်အဦးတွေဖြစ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံတွေမှာ လုပ်လို့ မရပါဘူး၊ သို့ ပေမယ့်ခြွင်းချက်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ဓမ္မာရုံတွေမှာတော့ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ စည်းရုံးတဲ့နေရာမှာ အသံချဲ့ စက် အသုံးပြုခွင့်မရခဲ့ပါဘူး၊ ဆောင်းဘောက် (Sound Box) ဘဲသုံးခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကြံ့ခိုင်ရေး (USDP) ကတော့ အာလုံးလုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ပါတီတွေက နောက်ကျမှ စည်းရုံးရေး ဆင်းခွင့်ရပြီး အောက်တိုဘာ (၃၀)ရက်နေ့ ကို နောက်ဆုံးရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ USDPပါတီကတော့ နိုဝင်ဘာလ(၄)၇က်နေ့ အထိ စည်းရုံးလုပ်ငန်းတွေကို အတားအဆီးမရှိ လုပ်နေတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ မဲစာရင်းနဲ့ မဲပေးတဲ့ အခြေအနေတွေကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ မဲစာရင်းကောက်တဲ့နေရာမှာ ရပ်ကွက်တခုလုံးကို ချန်ထားတဲ့တာမျိုးတွေ ၊မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း ရှိနေပေမယ့်မဲ ပေးရမယ့်စာရင်းထဲမှာ ထည့်သွားထားခြင်း မရှိတာတွေ တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ ရပ်ကွက်တစ်ချို့ ဆိုရင်လည်း ဘဲမဲခွင့်ရှိတဲ့လူ (၁၀၀)လုံးလုံး မပါတာတွေ၊ မဲပေးမယ်နိုင်တဲ့ လူဦးရေ (၁၇၀၀)လောက်ရှိရာမှာ မဲပြား(၁၅၀၀)သာ ချပေးထားမျိုးတွေ၊ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ၁၆နှစ်၁၇နှစ်ခလေးတွေ USDPပုံးထဲ မဲထဲ့ခိုင်းတာတွေ၊ ယာယီနိုင်ငံရေး ကဒ်ပြားတွေနဲ့ လာပေးတာတွေ၊ မဲကဒ်ပြားတွေပေါ်မှာ ကော်မရှင်တံဆိပ်တုန်းမပါဘဲ လာပေးတာတွေတွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ လူတယောက် မဲဘယ်နှစ်ခါ ထည့်ဆိုတာကိုလဲ သေချာစနစ်တကျ ကြည့်နိုင်အောင် လုပ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ မဲရုံအခြေအနေအနေနဲ့ လုံခြုံရေးပိုင်းမှာကတော့ လူ(၁၅၀၀)၀န်းကျင်လောက်ဘဲ ဆန့် တဲ့ရုံတွေမှာ ၂၀၀၀ကျော် ၃၀၀၀ကျော်လောက် မဲထည့်ခိုင်းတဲ့အတွက် အဆင်မပြေမှု အခက်အခဲများစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကျနော်တို့ ရှေ့ မှာ ပေါ်ပေါ်တင် ဗြောင်ကျကျ၊ မမျှမတဖြစ်မှုတွေ၊ အနိုင်ကျင့်မှုတွေနဲ့ မသာမှုတွေများစွာကို အာဏာပိုင်တွေက လုပ်ခဲ့တာ၊ ကျနော်တို့ လက်လှမ်းမမှီတဲ့ နေရာတွေမှာဆိုရင် ဒီထက်မက ပိုလုပ်ဖို့ ဘဲရှိပါတယ်။
Date/Time: Sun, 2010-11-07 (All day) Login to post comments